Sony Xperia XZ3: Nkọwapụta, ọnụahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị | Gam akporosis
Sony Xperia XZ3: Sony ọhụrụ flagship
N'ikpeazụ, ụbọchị ahụ abịa. Mgbe ọtụtụ nkwuputa gasị izu ole na ole gara aga, iji malite IFA 2018, Sony na-enye ọhụụ ọhụrụ ya. Dịka ị nwere ike icheworị, ọ bụ Sony Xperia XZ3. Ekwentị ọhụrụ dị elu site na akara Japanese. Enweela ọtụtụ mkpọtụ banyere ngwaọrụ a na izu ndị na-adịbeghị anya, ọ ga-emesị bụrụ ebe a.
Sony Xperia XZ3 bụ eziokwu nke kachasị elu, nke akara a na-achọ ịsọ mpi na nke a, nke ogo ya arịwanye elu na afọ gara aga. Lọ ọrụ ahụ na-etinye aka na okomoko, yana otu iko.
Banyere nkọwa, nke a Sony Xperia XZ3 adịghị emechu ihu ma ọlị. Ekwenyela ụfọdụ n'ime mkpọpu ahụ, dị ka ọnụnọ nke ihuenyo OLED, yabụ ịbụ ekwentị izizi nke ụlọ ọrụ iji jiri ya. Ihe ịrịba ama doro anya na anyị na-eche flagship ọhụrụ ya ihu.
1 Nkọwa Sony Xperia XZ3
2 Mmeghari nke Sony's high-end
Nkọwa Sony Xperia XZ3
Banyere imewe, ekwentị na-agba nzọ na Ambient Flow, nke bụ ọhụrụ imewe na anyị na-ahụ na ika si igwe. Ha abanyeghị na ejiji nke ọkwa, ihe ga-abụ ọtụtụ akụkọ ọma. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ekwentị:
Ihuenyo: 6-inch OLED nwere mkpebi pikselụ 2880 x 1440 na 18: 9 ruru
Nhazi: Octa-isi Snapdragon 845
Nchekwa ime: 64 GB (Nke a na-agbasawanye na 512 GB na microSD)
Igwefoto na-aga n'ihu: 19 MP nwere oghere f / 1.85, ọkụ ọkụ ọkụ, 4K, vidiyo 960 fps, FHD na mgbado laser
Igwe n'ihu: 13 MP nwere oghere f / 1.9 na Onye Okike 3D
Njikọ: Bluetooth 5.0, 4G / LTE, Dual SIM, WiFi 802.11a / b / g / n / ac…, USB C 3.1
Ndị ọzọ: Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na mpaghara azụ, asambodo IP68 maka mgbochi mmiri
Batrị: 3300 mAh na ntinye ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Sistemụ arụmọrụ: A gam akporo 9.0 achịcha
Akụkụ: 183 x 73 x 9.9 mm
Ibu ibu: 193 grams
Agba: nwa, ọla ọcha ọcha na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhịa
Mmeghari nke Sony's high-end
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Sony Xperia XZ3 a bụ ihe nrịba ama maka akara ndị Japan. Nhazi ahụ abụghị nnukwu ihe egwu, nke anyị nwere ike ịhụ bụkwa mgbanwe maka ụlọ ọrụ ahụ, nke jirila otu ụdị ahụ na ekwentị ya ogologo oge. Ya mere, ndị na-azụ ahịa nabatara mgbanwe a.
Ihuenyo bụ otu n'ime isi mgbanwe na njedebe dị elu a. Ọ bụ Sony ekwentị mbụ nwere OLED ihuenyo, nke na-etinye ya n'ogo nke ekwentị ndị ọzọ dị elu dị ka Galaxy Note 9 ma ọ bụ iPhone X. Na mgbakwunye, o nwere nchedo Gorilla Glass na anyị ga-egosipụtakwa akwụkwọ ikike IP68 nke ihe nlereanya a nwere. Nke pụtara na anyị na-eche ihu ekwentị na-eguzogide mmiri.
Ihe nwere ike iwute ọtụtụ n'ime Sony Xperia XZ3 a ọnụnọ nke otu igwefoto n'azụ. N'ahịa ebe igwefoto okpukpu abụọ bụ ọkọlọtọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu na njedebe dị elu, anyị na-ahụkwa igwe nwere kamera atọ, mkpebi a bụ ihe ijuanya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị adabere na njirimara ndị ahụ, anyị na-eche ihu igwefoto dị elu. Ya mere, anyị ga-echere ruo mgbe anyị ga-ahụ foto mbụ iji kpee ikpe.
Ọzọkwa, nnọọ ole na ole ọganihu e mere na software, nke kwesiri inye aka mee ka onyonyo ahu too. Ihe ọzọ ị ga-echebara echiche bụ batrị, nke ga-enye anyị nnwere onwe zuru ezu, nke gụnyekwara ngwa ngwa na nkwụnye ụgwọ ikuku. Ekwentị na-enye ohere abụọ nye ndị na-azụ ahịa.
N'ikpeazụ, otu n'ime akụkụ kachasị mma nke Sony Xperia XZ3 a bụ nke ahụ Ọ na-abịa na gam akporo 9.0 achịcha dị ka sistemụ arụmọrụ. Ekwentị ahụ wee bụrụ onye mbụ na ahịa ịbata na mba nke kachasị nso nso nke sistemụ arụmọrụ. Ezigbo ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ndị Japan na nke a.
Sony gosipụtara na ekwentị a ga-ere ahịa na Ọktọba. Releasebọchị ntọhapụ a họọrọ bụ October 5, nke ekwurubeghị ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ụwa niile ma ọ bụ maka ahịa mbụ ga-enweta ihe nlereanya a. Mana, agbanyeghị, anyị maara na ọ ga-akụ ụlọ ahịa na Ọktọba.
Banyere ahịa, E gosipụtaghị ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ. N'iburu n'uche nkọwa ya, na ọnụahịa mbụ nke ika ahụ, ọ gaghị abụ ihe ijuanya na ọ ga-eru nso ma ọ bụ karịa karịa 1.000 euro. Mana anyị ga-echere ụfọdụ nkwenye site na ụlọ ọrụ ahụ.
Sony Xperia XZ3 ga-ere ahịa na agba anọ: burgundy, green, isi awọ / ọlaọcha na nwa. Ọ bụ ezie na, ọ dị ka a gaghị ere nke mbụ n'ahịa niile, n'eziokwu, a naghị atụ anya ka agba agba burgundy a na Spain. Enweghị ihe ekwuru banyere nnweta dị iche iche nke agba ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony Xperia XZ3: Sony ọhụrụ flagship
Pocophone F1 na-ere na nkeji ise na India